Idatha yendawo kunye ne-3D ye-Civil-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Idatha ye-Topographic kunye ne-Civil 3D
Idatha ye-Topographic kunye ne-Civil 3D
Le Ntsimbi ye-15 ka-Apreli ye-2009 iya kwenziwa nge-webcast entsha Civil3D ekuphatheni kwedatha yezobugcisa phakathi kwazo ezibandakanya ukukhuphela kwedatha, isizukulwana sendawo kunye namacandelwana.
Ngenxa yale nto kufuneka ubhalise, unxibelelwano oluhloniphekileyo kunye nenkonzo phakathi kwe12 kunye ne-13.
Ukungenisa, ukuyila nokuthumela idatha ye-topographic data nge-AutoCAD Civil 3D
Ukungenisa idatha yenkalo kwi-survey.
Isizukulwana se-MDT kunye neenkcukacha ezide.
Amacandelo okutshintshwa kunye neekhabhi.
Ifakwe kwikhowudi ye-morse
Amaholide axhaswe yiGoogle Earth
Ndiyakunomdla kule nkqubo ndiyifumana umdla obunomdla, ubume be-ci3d ngenxa yokuba i-specificity of mine yilezo zonke iimodi kunye nokuyila kwemisebenzi yoluntu.